Wararkii Ugu Dambeeyey ee Tirinta Codadkii Doorashada Britain iyo May oo Caqabado Wajahdey – Radio Daljir
Wararkii Ugu Dambeeyey ee Tirinta Codadkii Doorashada Britain iyo May oo Caqabado Wajahdey
Juunyo 9, 2017 10:07 b 0
Ra’iisul wasaaraha Britain, Theresa May, ayaan iscasili doonin ka dib markii uu xisbigeeda muxaafidka ku lumiyay aqlabiyadda uu ku lahaa baarlamaanka doorashadii Khamiistii ka dhacday dalkaasi, sida ay ogaatay BBC.
Theresa May ayaa ku guuldaraysatay in ay xoojiso aqlabiyadda uu xisbigeeda ku lahaa baarlamaanka, ayadoo lagu wado inuu dhawaan furmo wadaxaajoodka uu dalkaasi kaga baxayo Midowga Yurub.
Inkastoo uu xisbiga muxaafidka lumiyay kuraas uu ku lahaa baarlamaanka, ayaa haddana weli waxa uu yahay kan ugu weyn UK.
Waxaa la saadaalinayaa in xisbigeedu uu heli doono 318 xilhibaan, halka xisbiga Shaqaalahana uu heli doono 261 xildhibaan. Waxaa soo raaca xisbiga SNP oo isna la saadaalinayo inuu heli doono 35 xildhibaan.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka, Jeremy Corbyn ayaa ugu baaqay Theresa May inay iscasisho, balse waxay sheegtay inuu dalku u baahan yahay ”xasilooni” taasoo uu xisbigeedu keeni kara.
Image captionTheresa May iyo Jeremy Corbyn ayaa codeeyay isniintii ka dib olole socday todoba isbuuc
Doorashadan oo ah mid wakhtigeeda laga soo hormariyay oo ay ku baaqday ra’iisalwasaaraha dalkaasi Theresa May, waxaana isu diiwaangeliyay in ay codkooda ku dhawaad 46.9 milyan oo qof.
Cod bixiyayaasha qaarkood goor hore ayayba codkooda u dhiibteen, oo waxa ay ku soo gudbiyeen boostada.
Codbixintan ayaa noqonaysa tii saddexaad oo dalkaasi ka dhacda muddo aan ka badnayn labo sano gudahood.
Doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 2015 ayaa waxaa isu diiwaangeliyay inay codeeyaan 46.4 milyan oo qof.
Dadka u soo baxay doorashadii 2015, markii xisbiga muxaafidka uu ku guulaystay 331 ka mid ah 650 kursi, ayaa waxa ay aheyd boqolkiiba 66.4, taas oo ka sarreysay doorashadii 2010.
MAANHADAL iyo Jamaal Faarax Aadan: Kala Lahaanshaha Daaqa Deegaanka Mudug (dhegayso)